पोर्चुगलमा नेपालीद्धारा सञ्चालित रेष्टुरेन्टलाई “द मोनोसियल रेष्टुरेन्ड” अवार्ड, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पोर्चुगलमा नेपालीद्धारा सञ्चालित रेष्टुरेन्टलाई “द मोनोसियल रेष्टुरेन्ड” अवार्ड
काठमाडौं । पोर्चुगलमा नेपालीहरुद्धारा सञ्चालित रेष्टुरेन्टले अवार्ड प्राप्त गरेको छ । नेपालीद्धारा सञ्चालित ‘आन्तोनिया पितिस्को’ नामक रेष्टुरेन्टले “द मोनोसियल रेष्टुरेन्ड अवार्ड २०१८” प्राप्त गरेको हो।
बेलायतको प्रतिष्ठित द मोनोसियल नामक संस्थाले उक्त रेष्टुरेन्टलाई द मोनोसियल रेष्टुरेन्ड अवार्ड २०१८ प्रदान गरेको हो। मोनोसियल अवार्डको चौथो संस्करणको क्रममा उक्त रेष्टुरेन्टले ३० औं स्थानमा बस्दै अवार्ड पाएको हो।
उक्त अवसरमा अवार्ड आयोजकले आन्तोनिया पितिस्कासहित अन्य ५० वटा उत्कृष्ट रेष्टुरेन्टहरुलाई अवार्ड प्रदान गरेको थियो। सफा खाना, पहुनाको स्वागतमा विशेष ध्यान दिएको तथा रेष्टुरेन्टको लागि उत्कृष्ट वातावरण रहेको भन्दै अवार्ड दिएको रेष्टुरेन्ट सञ्चालक तथा म्यानेजर महेश्वर कुवँरले बताए।
आइसमालामो समयसम्म राखेका (फ्रोजन) खानेकुराहरु प्रयोग नगर्नुे तथा स्वच्छ सफा खानेकुराहरु प्रयोग गर्नु नै हाम्रो रेष्टुरेन्टको मुख्य विशेषत भएको सञ्चालक कुँवरको भनाई छ।
अवार्ड दिने आयोजक समूहले उक्त रेष्टुरेन्टमा आएर धेरै पटक खानेकुरा खाएर रेष्टुरेन्टको खाना र सेवाको मूल्याङ्कन गरेको थियो। जुन कुरा रेष्टुरेन्टलाई अवार्ड प्राप्तपछि मात्र आयोजकले जानकारी दिएको कुँवरले बताए।
आन्तोनिया पितिस्का रेष्टुरेन्ट पोर्चुगलको लिजवन सहर स्थित बाइरो अल्तो स्थानमा रहेको छ। विशेषगरी पोचुगिज खाना पाईने उक्त रेष्टुरेन्टमा सी फूड, अक्टोपसलगायतका समुन्द्रमा पाईने जीवहरुको परिकारका साथै पोर्चुगलका स्थानीय रक्सी तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका रक्सी तथा अन्य पेय पदार्थहरु पाईन्छ।
रेष्टुरेन्टमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकरु युरोप, अमेरिका तथा एसियाका रहेका छन्। बाँकी ग्राहक भनेको पोर्चुगलका रहेका छन्। हेड सेफ चुडामणि अधिकारीका अनुसार हामी ग्राहकको सन्तुष्टिलाई विशेष ध्यान दिदै सोहि अनुसारको स्वदिष्ट खाना बनाउने र उत्कृष्ट सेवा दिने प्रयासमा निरन्तर लागि रहेका हुन्छौं, सोहि कारणले गर्दा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको बताए।
यस्तै अवार्ड प्राप्त गरेसँगै जिम्मेवारी बढेको महशुस भएको अर्का सञ्चालक तथा लगानीकर्ता स्यामबाबु ढकालले बताए। पछिल्लो समय ग्राहकको संख्यामा समेत वृद्धि भइरहेको उनले भने।
दैनिक १२ घण्टा अर्थात् दिउँसो १२ बजेदेखि रातको १२ बजेसम्म खुल्ने उक्त रेष्टुरेन्टमा दैनिक २ सयभन्दा बढी ग्राहक आउने गरेको सञ्चालकको भनाई छ। १४ फेब्रवरी २०१४ मा स्थापना गरिएको उक्त रेष्टुरेन्टको लगानी रकम भने नेपाली रुपैयाँ करिब साढे दुई करोड रहेको छ।